NCS Sheffield - Ozi Mmemme Element Society
Jikọọ Sheffield CCS nke Element Society kwadoro taa!
MEGODỊ OKWU gị
Echefula ohere ị ga - etinye aka na NCS.
N'otu oge dị egwu, ị ga-ebi n'ụlọ, ịzụlite nkà iji bulie gị CV, ma zute ndị ịtụnanya ị gaghị echezọ. Kedu ihe ị na-eche? Mgbanwe amalite na EE!
PHASE 1: BỤ EBE
Nke mbụ, ị ga-etinye oge na-aga n'ụlọ na-anụ ụtọ ọrụ ndị a na-eduzi na-akụzi.
Ị ga-ejikọta na ndị otu egwuregwu na njem na-arụ ọrụ n'ime ụlọ ọrụ na-emepụta ihe n'èzí na-eme ihe dị ka ịrị elu nkume, ịga njem, ịkụ ụgbọ mmiri, na ịkụ ụta.
PHASE 2: BỤ NDỊ BỤ
N'ịga n'ụlọ, ìgwè gị ga-etinye oge n'ịmụ banyere mpaghara mpaghara gị.
Ị ga-ezute ndị mmadụ site na azụmahịa na mpaghara ndị na-enyere gị na ndị òtù NCS gị aka ịzụlite nkà ọhụrụ.
PHASE 3: KWU ỤLỌ gị
Ị ga-arụ ọrụ na otu gị iji tọọ atụmatụ na ịchọta maka ego maka ihe omume nke obodo gị nke nwere ike ime ezigbo mgbanwe n'ebe ị bi.
Ị ga-eme akara gị na mpaghara gị, na-enye ọrụ gị na mpaghara gị.
NA GỤKWUO ...
N'ikpeazụ, mgbe ị rụchara ọrụ ime obodo, ọ bụ oge ime ememe na a akwukwo ngụsị akwụkwọ.
Ị ga-enweta akwụkwọ amaba aka nke onye ụkọchukwu na-abanye ma nweta ohere pụrụ iche iji nọgide na-ewepụta onwe gị ma nọrọ na mpaghara gị na NCS.
CHANGE GỤGỤ GỊ KWURU
NCS naanị izu ikpeazụ 4, na-agbaji n'etiti, n'ihi ya enwere oge maka ememe egwú na ezumike ezinụlọ. Ndị NCS niile ahụ na-enweta ụgwọ naanị £ 50, tinyere nri, ọrụ, na ebe obibi, na enyemaka ego dị kwa. Mee NCS otu akụkụ nke oge okpomọkụ gị!
* Ihe omume a nke Element Society na-enye ga-efu gị karịa £ 50, yana nkwado ego dịnụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa *
Element Society na-anapụta usoro NCS n'ime afọ. Mmemme nwere ike ịdị iche na-adabere n'onye ị na-esonyere, na oge ole n'afọ ka ị na-ekere òkè, yabụ jide n'aka na ị ga-achọpụta kpọmkwem ihe usoro ị họọrọ.
Maka ama ndị ọzọ, kpọtụrụ anyị na 0114 2999 210, ma ọ bụ e-mail anyị Team NCS na ncs@elementsociety.co.uk
*** Jide n'aka na ịhọrọ Element dị ka onye na-eweta gị iji nweta ego ego 15 gị online! ***